Kismaayo News » Amaanka dalka oo laga shiray
Amaanka dalka oo laga shiray
Kn: Madaxda dawladda federaalka, kuwa maamul gobolleedyada iyo hay’addaha ku shuqul leh amaanka ayaa maanta caasimadda Muqdisho oogu shiray sidii wax looga qaban lahaa amaanka guud ee dalka.
Shirkan oo ahaa kii 2aad oo ka dhaca Muqdisho tan iyo intii la dhisay dowladda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Farmaajo ayaa looga golleeyahay in looga rinsado sidii Shabaabka looga cirib tiri lahaa dalka.
Marka laga reebo kulanka ay isugu yimaadeen madaxda qaranku, ma muuqato qorshe cad oo si fiican daraasaad loogu sameeyay oo lagu xaqiijinayo sugista amaanka guud ee dalka, gaar ahaanna Muqdisho oo ah ubucdii qaranka. Waxa ugu badan ee laga hadlayay wuxuu ahaa “aan yeelno…. aan iska kaashanno, aan gacmaha isqabsano” iyo erayo aan macno badan u samaynayn ka miro dhalinta qaabkii looga gudbi lahaa xaaladdan murugsan ee dalku ku jiro iyo argagixisada sii xoogaysanaysa.
Sida uu nala wadaagay siyaasi ka gaabsaday magaciisa, wuxuu shirkan ku tilmaamay “socon weynayee aan orodno” oo uu ula jeeday in shirkii xalinta khilaafaadka ee maalmaha u socday madaxda dawladda dhexe iyo kuwa gobollada uu maxsuul fiican yeelan waayay marka ay madaxdu u aragtay in bal maanka dadka meel kale loo weeciyo. Wuxuu farta ku fiiqay in marka laga reebo hadallada wanaagsan ee ka soo burqada madaxda, aysan jirin qorshe qeexan oo kala leh mudnaan oo ku aadan amniga, xasilinta dalka, kobcinta dhaqaalaha iyo dajinta siyaasadda uusan oo u degsan hogaanka dalka.
Sikastaba ha ahaatee, shirkan oo daba socday shir horay uga dhacay Xamar ayuusan jirin wax sii halaabay mooyee wax soo hagaagay tan iyo intii u dhaxaysay labada shir, mana aysan dhicin in shirkan lagu soo qaado sababta ay u suuroobi wayday in wixii hore ee lagu heshiiyay uu hal shay oo kamid ahna hirgalo.